ကျွန်တော်တို့ Cyber Command တွေ လိုအပ်လာပြီလား? | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
ကျွန်တော်တို့ Cyber Command တွေ လိုအပ်လာပြီလား?
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ အချိန်လောက်က You Tube မှာ ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီး hacker အဖွဲ Anonymous ကလို့ ယူဆရတဲ့ video တစ်ခု တက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်တဲ့ Guy Fawkes မျက်နှာဖုံးကုို ဝတ်ဆင်ထားပြီး အသံကိုပါ ဖျက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုထဲက ပုဂ္ဂိုလ်က စင်ကာပူ နိုင်ငံ အစိုးရကို ချိန်းခြောက် ထားတာပါ။ အရင်က အွန်လိုင်းမှာ အဲဒီ မျက်နှာဖုံးနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မထင်မရှားပုံတွေ ၊ တိုက်ခုိုက်သွားတာတွေ မကြာခဏ တွေ့ရပေမဲ့ ကျွန်တော် သိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။ အခုက စင်ကာပူ နိုင်ငံလို့ သိလိုက်ရတာကြောင့် ကျွန်တော် နည်းနည်း တုန်လှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပါ။
အမေရိကန် နိုင်ငံလို နိုင်ငံကို အဲဒီ မျက်နှာဖုံးစွပ်အဖွဲ့ ချိန်းခြောက်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အစိုးရမှာ Cyber Command လို့ သူတို့ ဆိုတဲ့ အင်တာနက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကာကွယ်တားဆီးမယ့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ ဆိုတာ အင်အား တောင့်တင်းတယ် ဆိုတာ သိပြီးသားမို့ သိပ်မပူပန်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူ နုိုင်ငံ မှာ ဒီလို အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ Cyber Command ဆိုတာမျိုး ရှိပါ့မလား ကျွန်တော် ကြံဖန်တွေး မိတာပါ။ ခြိမ်းခြောက်ချက်ကတော့ ကြောက်စရာပါ သူတို့ပြောတာကို မလုပ်ရင် စင်ကာပူ နုိုင်ငံဟာ အသားစတွေကုန်အောင် တွတ်တတ်တဲ့ Piranha ငါးတွေ ရှိတဲ့ ကန်ထဲ ဆင်းရသလို ဖြစ်စေရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက် စွမ်းဆောင် နိုင်မလဲ မသိရပေမဲ့ အသည်းတော့ ယားစရာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ သူတို့က စင်ကာပူ နိုင်ငံ အစိုးရက အသစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ အွန်လိုင်း မီဒီယာ လိုင်စင် ဥပဒေကုို မကျေနပ်တာကြောင့် အခုလို ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုလုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်ကို အလွယ်ဆုံးနဲ့ အထိ အနာဆုံး ဖြစ်အောင် ၊ လူအင်အား အနည်းဆုံး နဲ့ တိုက်ခုိုက် နိုင်တဲ့ နည်းက online ကပဲလို့ ထင်မိပါတယ်။ Boston Times သတင်းစာမှာ တစ်ခါတုန်းက Cyber Command တွေ အကြောင်းရေးတော့ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေးက ကာတွန်း sketch လေးပါ။ ပလတ်ခေါင်းတွေ ၊ ကွန်ပျူတာ cable ခေါင်းတွေ ဆွဲထားပြီး အောက်က ပေါ်နေတဲ့ အရိပ်မှာတော့ တိုက်လေယာဉ်ပုံတွေ ဆွဲပြထားတာပါ။ ရိုးရုိုးရှင်းရှင်း နဲ့ လိုရင်းကို ဆွဲပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံတစ်ပုံပါ။
၃၁ ရက်နေ့က စင်ကာပူ နိုင်ငံကုို ခြိမ်းခြောက်သွားတဲ့ Anonymous ရဲ့ ဗီဒီယို က နေ့လည်ခင်း ၁ နာရီ ခွဲလောက်မှာ တက်လာပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ညနေခင်းပိုင်းမှာ ဖျက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ Infocomm Development Authority of Singapore က ဒီကိစ္စကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းနေပါပြီလို့ အသိပေးထား ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရော အသံပါ ဖျက်ထားတဲ့ ဒီ video မှာတော့ သူတို့က Messiah ဆိုသူကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုမှုတွေ ပြုသွားပြီး အဲဒီ Messiah ဆိုသူက လက်တလော စင်ကာပူနိုင်ငံ Ang Mo Kio Town Council ဝဘ်ဆိုဒ် ၊ PAP Community Foundation ဝဘ်ဆုိုဒ် ၊ Sun Ho ရဲ့ official website တွေ ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့မှုမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ YouTube video မှာတော့ Messiah ဆိုတဲ့ Anonymous အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်တည်းတောင် ဒီလောက် စွမ်းဆောင်ခဲ့ရင် သူတို့ တစ်ဖွဲ့လုံး ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ဆိုရင် ဘယ်လောက် တာသွားမလဲ စဉ်းစား ထားပါလို့ ပြောသွားပါသေးတယ်။
အစစ်လား ၊ Halloween မို့ ဝင်နှောက်တာလား ဘာလည်းတော့ မပြောတတ်ပါဘူး ။ သူက စင်ကာပူ နိုင်ငံသားတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဒီ online media rule ကို ပြင်ပေးဖို့ နိုင်ငံသားတွေလည်း နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ အနက်နဲ့ အနီ တွဲဝတ်ပြပြီး သူတို့ နဲ့ ပူးပေါင်းပါလို့ ပြောသွားပါသေးတယ်။ ဒီကိစ္စကို စင်ကာပူ နုိုင်ငံက လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ စုံစမ်း စစ်ဆေးနေပြီး ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ကူးထဲမှာ တကယ်ဖြစ်လာရင် ဆိုတာ တွေးနေမိပါတယ်။ စင်ကာပူ နုိုင်ငံကတော့ အေးအေးလူလူ ဖြေထားပုံ ထောက်ရင်တော့ ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့ Cyber Command ရှိနေပြီလို့ပဲ ယူဆမိ သလို ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ပြီး တွေးနေမိပါတယ်ဗျာ။
(နည်းပညာဗဟုသုတရရှိစေရန် တူလေး(နည်းပညာသတင်းများ)မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
← Huawei All-in-One Bootloader Unlocker v1.0.1 apk (Latest Version)
Download Paranoia  BRRip XViD [700MB]+Eng Subtitle[91KB] →